15 Shahaadooyinka Degdegga ah ee Ugu Fiican ee Si Fiican u Bixiya
Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee loo helo waxbarasho waa in la dhiso xirfad ama shaqooyin aamin ah oo si fiican u bixiya. Intaad sii wadato shahaadooyinka, waxaa jira shahaadooyin bixiya kuwa ka sarreeya kuwa kale. Shahaadooyinkani waxay daboolayaan inta badan shaqooyinka loo baahan yahay inaad waligaa hareeraha ka heli karto. Sidaa darteed, wax ka baro shahaadooyinka degdegga ah ee si fiican u bixiya.
Adiga oo helaya shahaado, aad ayey ugu fududaan doontaa xirfadleyda shaqeeya inay helaan dallacsiin, beddelaan shaqooyinka, ama ay helaan mushahar sare. Intaa waxaa sii dheer, qofku wuxuu heli karaa xirfado badan iyo aqoon looga baahan yahay shaqooyinka qaarkood isagoo helaya shahaadooyin.
Raadinta shahaadooyinka si loo helo shahaadooyin dhakhso leh oo si fiican u bixiya waa wax aad u fudud. Uma baahnid inaad booqato afarta darbi ee fasalka si aad wax ugu barato. Sababtuna waxay tahay waxaad xaqiiqo ah ku heli kartaa shahaado kasto adiga oo wax ka baranaya raaxada gurigaaga ama xafiiskaaga.
Marka, haddii aad rabto inaad waxbarto si aad uhesho shaqooyin aad u sarreeya, maqaalkani wuxuu ku siin doonaa caddeyn dhakhso leh oo adiga si fiican wax kuu siisa.
Ma la aqoonsan yahay shahaadooyin deg deg ah?
Waa maxay caddaynta dhaqsaha badan ee la helo?
Miyaan ku heli karaa caddeyn dhakhso ah bilaash?
Maxay yihiin faa'iidooyinka helitaanka shahaado deg deg ah?
Maxay yihiin shahaadooyinka degdegga ah ee sida fiican uga bixiya Kanada?
Shahaadooyinka Degdegga ah ee Ugu Fiican ee Si Fiican u Bixiya
Farshaxanada Qurxinta Masraxa
Takhasusayaasha Gargaarka Maqalka
Teknolojiyadda Wadnaha iyo Xididdada Wadnaha
Rakibayaasha Sawir-qaadaha Qorraxda
Dhakhaatiirta Caafimaadka ee Degdegta ah (EMTs)
Farsamo yaqaanada 'Phlebotomy Technicians'
Haa. Shahaadooyinka degdegga ahi waxay ka caawiyaan shaqaalaha inay helaan dallacsiin, beddelaan shaqooyin, iyo inay mushahar u kordhaan goobahooda shaqo ee kala duwan.
Dhammaan shahaadooyinka degdegga ah ee si fiican u bixiya, tababarka farsamo yaqaan phlebotomy ayaa ah shahaadada ugu dhakhsaha badan ee la helo. Tababarku wuxuu u baahan yahay oo keliya kow iyo toban (11) toddobaad si loo dhammaystiro.
Haa. In kasta oo inta badan barnaamijyada shahaadadu ay ku yimaadaan qiimo, waxaa jira kumanaan barnaamijyo shahaadooyin deg deg ah ah oo aad internetka kaga heli karto bilaash. Barnaamijyadan shahaadada bilaashka ah waxaa bixiya machadyo la aqoonsan yahay oo adduunka laga aqoonsan yahay.
Waxaa jira faa'iidooyin dhowr ah oo lagu raadinayo dibloomaha gaagaaban iyo barnaamijyada shahaadada. Halkan, waxaan ku eegi doonaa faa'iidooyinka.
Ku qaadashada barnaamijyada shahaadada gaagaaban noloshaada xirfadeed waxay ku siin doontaa farsamooyin iyo farsamooyin dheeri ah oo dheeri ah oo kaa kasban doona mushahar kordhin goobtaada shaqada.
Markaad xirfado iyo aqoon dheeri ah ka kasbato barnaamijyada shahaadooyinka degdegga ah, waxaad yeelan doontaa aqoon dheeraad ah oo ku siinaysa dallacsiintaada wanaagsan goob kasta.
Markii aad barato koorsooyin gaagaaban oo dheeri ah, waxaad helaysaa xirfado badan oo aad ku dabaqi karto xirfaddaada hadda ama xirfadaha aad rabto inaad yeelato.
Adoo ka qaadaya barnaamijyo shahaado dhakhso ah ama gaaban khadka tooska ah, waxaad fursad u heli doontaa inaad xiriir la yeelato xirfadlayaal kale oo ku takhasusay qaybaha kala duwan ee waxbarashada. Waad ku dhisi kartaa shabakadahaan xirfadda leh xiriirinta ardayda kale markaad isticmaaleyso bar internet-ka ah oo wax lagu barto. Isku xirnaanta aad dhisayso waxay saameyn ku yeelan kartaa xirfaddaada.
Hoos waxaa ku taxan shahaadooyinka degdegga ah ee sida fiican uga bixiya Kanada:
Farsamo yaqaan isgaarsiinta
Farsamo yaqaan dejinta
Soo saare muusig
Nooca shaqada aad rabto ayaa go'aamin doonta shahaadada aad yeelan doonto. Waad ku dhammaysan kartaa qaar ka mid ah barnaamijyada shahaadada wax aan ka badnayn lix (6) bilood halka kuwa kale ay u baahan doonaan laba sano ama ka badan in la dhammaystiro.
Sidaa darteed, shahaadooyinka ugu dhakhsaha badan ee si fiican u bixiya waa kuwa soo socda:
Rakibayaasha Solar PV
Takhaliyeyaasha Caafimaadka ee Degdegta ah
Xirfadlayaashani waxay qurxiyaan kuwa sameeya si ay u matalaan xilliga, dejinta, iyo xaaladda kaalimahooda. Farshaxanada qurxinta tiyaatarka ayaa tan sameeya iyagoo falanqeynaya macluumaadka soo-saarka oo ay ku jiraan sharraxaadda astaamaha, dejinta muddada, iyo xaaladaha si loo go'aamiyo shuruudaha qurxinta.
Farshaxan-yahannada qurxinta tiyaatarka iyo waxqabadka waxay sidoo kale marsadaan qurxiyo si loo hagaajiyo muuqaalka dadka ka soo baxa wax soo saar sida filimada Waa mid ka mid ah shahaadooyinka degdegga ah ee sida wanaagsan u bixiya.
Celceliska mushaarka sanadlaha ah ee farshaxanada qurxinta tiyaatarka iyo waxqabadka waa $ 106,920.
Tikniyoolajiyadda shucaaca waxay si dhow ula shaqeeyaan shucaaca si ay si fiican bukaanka ugu xajiyaan inta lagu jiro baaritaanka cudurka si loo hubiyo in la soo saaro sawirro baaritaan oo tayo leh.
Xirfadlayaashani waxay ka kooban yihiin kooxda saddexaad ee ugu weyn xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka ee ka dambeeya dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka. Waxay ku sameeyaan raajooyin iyo baaritaanno kale oo lagu ogaanayo cudurka bukaannada iyadoo la adeegsanayo astaamo-yaqaannada 'Magnetic Resonance Imaging (MRI)'. Waxay ka mid tahay shahaadooyinka ugu dhakhsaha badan ee si fiican u bixiya.
Tikniyoolajiyadda shucaaca ayaa sameeya celcelis ahaan mushahar sanadle ah $ 61,900.
Takhasusayaasha Gargaarka Maqalku waa xirfadlayaal baaraya dadka leh arrimaha maqalka isla markaana doorta qalabka gargaarka maqalka ee ugu wanaagsan ee hagaajin doona xaaladooda.
Dadka da'da ah waxay la kulmaan maqal la'aan ka badan dadka da'da yar. In kasta oo gabowgu yahay sababta ugu weyn ee maqal la'aanta, buuqa weyn, infekshinka, burooyinka, dhegaha oo dillaacay, iyo isku-soo-uruurinta dhegta dhegaha ee xad-dhaafka ah ee kanaalka dhegta ayaa sababa maqal la'aan.
Khubarada Gargaarka Maqalka waxay tijaabiyaan maqalka dadka waxayna u isticmaalaan natiijooyinka baaritaanka inay duubaan aalada maqalka ee ka caawin doonta iyaga. Waxay sidoo kale baraan macaamiisha sida loo isticmaalo qalabka isgaarsiinta.
Waa mid ka mid ah shahaadooyinka degdegga ah ee si fiican u bixiya xirfadleyda iyagoon u baahnayn shahaadada bachelorka.
Khubarada Gargaarka Maqalka waxay sameeyaan celcelis ahaan mushaar sanadle ah $ 52,630.
Shaqaalaha duulimaadka waxay hubiyaan in rakaabka saaran diyaaradda ay yihiin kuwo deggan oo ammaan ah. Waxay qayb ka yihiin shaqaalaha kaxeynta ee ka shaqeeya ganacsi, ganacsi, ama diyaarado milatari.
Ragga kaxeeya duulimaadka waxaa loogu yeeraa ilaaliyeyaal ama martigaliyayaal hawleed halka dumarka loo yaqaanno maamuleyaal ama hawo martiyeyaal.
In kasta oo shaqaalaha duulimaadka loo tababbaray diyaaradda ay ka shaqeeyaan, haddana barnaamijyada shahaadadooda waxay la mid yihiin Xakamaynta Hawada Cirka. Xirfadlayaashani waxay ka helaan shahaadooyinkooda Maamulka Duulista Hawada Federaalka (FAA).
Mushaarka sanadlaha ah ee shaqaalaha duulimaadka waa $ 59,050.
Farsamayaqaannada wadnaha iyo xididdada dhiigga (CVT) waxay ka shaqeeyaan sheybaarka wadnaha si ay uga caawiyaan takhaatiirta baaritaanka iyo daaweynta bukaanada qaba ama u badan inay yeeshaan cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Waxay u isticmaalaan qalabka korontada ku shaqeeya (EKG), qalabka dhismaha, qalabka wadnaha wadnaha ka sameeya, iyo qalabka wax lagu khafiifiyo si loo ogaado cudurka wadnaha.
Qaar badan oo ka mid ah machadyada dugsiga sare ayaa bixiya shahaadooyin jaamacadeed iyo shahaadada koowaad ee maadadan. Si kastaba ha noqotee, waxaad ka heli kartaa barnaamijka shahaadada kulliyad iyo isbitaalada qaarkood waxayna kugu qaadan doontaa hal sano inaad dhameystirto.
Intaad raadineyso barnaamijka shahaadada, hubi inuu aqoonsan yahay Gudiga Aqoonsiga Barnaamijyada Caafimaadka Iskuullada ah (CAAHEP).
Celcelis ahaan mushaarka sanadlaha ah ee farsamayaqaannada tiknoolajiyadda wadnaha ayaa ah $ 59,100.
Farsamo yaqaanada HVACR waxay rakibtaan, dayactiraan, oo ay dayactiraan kuleylka, qaboojiyaha, hawo bixinta, iyo nidaamyada qaboojiyaha.
Iskuulada ganacsiga iyo kuliyadaha bulshada waxay bixiyaan tababaro iyo barnaamijyo shahaadooyin ah farsama yaqaanada HVACR. Barnaamijku wuxuu socdaa inta udhaxeysa lix (6) bilood iyo labo (2) sano.
Adiga oo hela shahaado ahaan farsamo yaqaan HVACR, waxaad qaadan kartaa shaqooyin injineer taagan, farsamo yaqaan marawaxadaha, shaqaale guud oo dayactir iyo dayactir ah, rakibayaasha qalabka wax lagu karsado ee qoraxda, kuleyliye, ama xitaa koronto yaqaan.
Farsamayaqaanada HVACR waxay sameeyaan mushaar sanadle ah oo dhexdhexaad ah $ 50,590.
Rakibayaasha Solar PV ayaa mas'uul ka ah isku-uruurinta, rakibidda, iyo dayactirka nidaamyada sawir-qaadaha qorraxda ee saqafyada ama dhismayaasha iyadoo la raacayo qiimeynta goobta iyo istiraatiijiyadaha. Waxa kale oo laga yaabaa inay qabtaan shaqooyin yaryar oo koronto ah sida jeegaga hadda socda.
Dugsiyada ganacsiga, iskuulada farsamada, iyo kulliyadaha bulshada ayaa bixiya barnaamijyo tababar iyo shahaadooyin ah oo arimahan ku saabsan. Xirfadlayaasha qaar ka mid ah arimahan ayaa laga yaabaa inay ku tababaraan shaqada-iyagoo si dhow ula shaqeynaya rakibaye qoraxda PV oo qibrad leh Waa mid ka mid ah shahaadooyinka ugu dhakhsaha badan ee si fiican u bixiya.
Rakibayaasha Solar PV waxay sameeyaan mushaar sanadle ah oo dhexdhexaad ah $ 46,470.
Choreographers waxay si dhow ula shaqeeyaan agaasimayaasha iyo agaasimayaasha muusikada si loo horumariyo loona hago dhaqdhaqaaqa qoob ka ciyaarka asalka ah iyo jadwalka bandhigyada iyo soosaarka.
Waxay akhriyaan qoraallo waxayna tarjumaan heesaha si ay u abuuraan taxane qoob-ka-ciyaaraya si ay ula jaan qaadaan heesaha oo ay u hubiyaan in dhaqdhaqaaqa uu raacayo tarjumaadda asalka ah.
Celceliska mushaarka sanadlaha ah ee choreographers waa $ 43,680.
Daaweeyeyaasha duugista waxay ka shaqeeyaan goobaha daryeelka caafimaadka, guryaha macaamiisha, meelaha loo dalxiis tago, meelaha loo yaqaan 'spa', iyo xarumaha jirdhiska iyadoo la adeegsanayo taabashada si loogu daaweeyo macaamiisha iyadoo la maareynayo muruqyada iyo unugyada kale ee jilicsan si loo yareeyo xanuunka oo loo bogsado dhaawacyada.
Waxay la shaqeeyaan dhakhaatiirta iyo / ama lafopractors si ay uga caawiyaan daaweynta jireed ee bukaanka ama ka soo kabashada dhaawaca. Intaa waxaa dheer, daaweeyayaasha duugista ah waxay macaamiisha baraan jimicsi habboon, fidin, iyo farsamooyin nasasho. Waa mid ka mid ah shahaadooyinka ugu dhakhsaha badan ee si fiican u bixiya.
Daaweeyeyaasha duugista ayaa sameeya celcelis ahaan mushahar sanadle ah $ 43,620.
Wakiilada safarka waxay ka dhigayaan habka safarka macaamiishooda mid aad u fudud si macaamiisha ay u helaan khibrad safar oo ka wanaagsan. Waxay aaminaan qabanqaabada safarka ee macaamiishooda iyagoo la shaqeynaya kombuyuutarrada ama waxay soo wacayaan diyaaradaha, khadadka dalxiiska, meelaha dalxiisyada, iyo shirkadaha kirada ah.
Qabanqaabada safarka waxaa ka mid ah meelaha safarka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, diyaarinta gaadiidka, iyo hoy.
Wakiilada safarka waxay ka helaan tababar iyo shahaado ururada warshadaha qaarkood, iskuulada xirfadaha, iyo kuliyadaha bulshada. Waa mid ka mid ah shahaadooyinka ugu dhakhsaha badan ee si fiican u bixiya.
Celceliska mushaarka sanadlaha ah ee wakiilada safarka waa $ 42,350.
Sawir qaadayaashu waxay sawirro ku qaataan kamarad dijitaal ah ama filim waxayna ku tafatirtaa muuqaalka muuqaalka ee dhufto badan. Waxay u geeyaan alaabada ugu dambeysa ilo badan sida macaamiisha gudaha iyo dibedda, warbaahinta, naqshadeeyayaasha garaafka, iyo isgaarsiinta shirkadaha.
In kasta oo aan loo baahnayn shahaado si uu u noqdo sawirqaade wanaagsan, haddana barnaamijka shahaadada ee sawir qaadista wuxuu furi doonaa fursado sawir saynis / warshadeed, sawir caafimaad, iyo sawir-qaadasho.
Celceliska mushaarka sanadlaha ah ee sawir qaadayaasha ayaa ah $ 41,280.
Kaaliyeyaasha ilkaha waxay bukaanleyda u diyaariyaan daaweyn, nadiifiyaan qalabka, waxay ku taageeraan dhakhaatiirta ilkaha iyagoo gudbinaya qalabka inta lagu jiro howlaha daaweynta, waxayna bukaanka ka caawiyaan nadaafadda afka. Waxay sidoo kale caawiyaan dhakhaatiirta ilkaha inta lagu jiro guud ahaan hababka suuxdinta ilkaha, qaadashada dareenka ilkaha, iyo duubista qoraalada bukaanka.
Barnaamijyada shahaadada caawinta ilkaha waxay qaadanayaan inta udhaxeysa lix (6) bilood ilaa hal sano si loo dhameystiro. Barnaamijyada waxaad ka heli kartaa kuliyadaha bulshada iyo dugsiyada farsamada.
The Caawinta Ilkaha ee Golaha Qaranka waxay sheegaysaa in kalkaaliyeyaasha ilkaha ee la xaqiijiyay inay celcelis ahaan sameeyaan $ 20.76 saacaddii. Caawiyeyaasha ilkaha waxay kasbadaan celcelis ahaan mushahar sanadle ah $ 41,180.
Fitness macallimiintu waxay taageeraan, bartaan, kuna dhiirrigeliyaan shaqsiyaadka ama kooxaha howlaha jimicsiga sida jimicsiga wadnaha, tababarka xoogga, iyo fidinta. Waxay u fidiyaan adeegyadooda dadka da 'kasta leh iyo heerarka xirfadeed.
Tababarayaasha jimicsiga ama macallimiintu waxay ka shaqeeyaan jimicsiga, tas-hiilaadka isboortiga, istuudiyaha qoob-ka-ciyaarka, isbitaalada, iwm.
Waxaad iska qori kartaa barnaamijyada shahaadada khadka tooska ah si aad u hesho shahaado duurka ku jirta. Barnaamijyada khadka tooska ah waxay ku qaataan in ka badan lix (6) bilood in la dhammaystiro.
Celceliska mushaarka sanadlaha ah ee barayaasha jimicsiga ayaa ah $ 40,510.
Farsamayaqaannada Caafimaadka Degdegta ah (EMTs) waxay ka jawaabaan xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka iyagoo maareynaya daryeelka taageerada nolosha iyo gargaarka degdegga ah si loo joojiyo xaaladaha bukaanka ee ka sii daraya ka hor inta aysan isbitaalka gaarin.
Xirfadlayaashan waxaa sidoo kale loo yaqaan dhakhaatiirta caafimaadka. Waxay dejiyaan bukaanka, waxay keenaan dib-u-kicinta wadnaha iyo wadnaha (CPR), geliyaan khadadka IV, waxay dhalaan carruur, waxay maareeyaan jabka iyo dhaawacyada, waxayna siiyaan oksijiin bukaanada.
Kulliyadaha bulshada iyo machadyada farsamada waxay bixiyaan barnaamijyo shahaado teknolojiyad caafimaad oo degdeg ah.
EMTs waxay sameeyaan celcelis ahaan mushahar sanadle ah $ 36,650.
Farsamo yaqaanada 'Phlebotomists' (Phlebotomists) ayaa mas'uul ka ah dhiig ka qaadista bukaanada tabarucaadka, tijaabooyinka, iyo shaqooyinka kale ee tijaabada ah ee isbitaalada, xafiisyada dhakhaatiirta, sheybaarada, soo saarayaasha, iyo dowlada.
Intii aad noqon laheyd phlebotomist waxay ubaahantahay tababar gacmeed dheeri ah, barnaamijyada shahaadada waxay albaabada ufuraan kor uqaadista berrinka. Barnaamijka shahaadada wuxuu qaadanayaa kow iyo toban (11) toddobaad in la dhammaystiro.
Phlebotomists waxay sameeyaan celcelis ahaan mushahar sanadle ah $ 36,320.
6-da Shaqadood ee ugu sareysa ee aad ku kasban karto shahaadada Saadka
12 Shaqooyinka Ugu Lacag Bixinta Badan Tamarta
13 Shaqooyinka Ugufiican ee Hooyooyinka Guriga Lagujoogo oo aan Khibrad Laheyn
10 Shaqooyinka Waqti-Barbaarinta ee Ugufiican Ardayda Kulliyadda
7-da Kooras ee Suuqa Kaydka ee Bilaashka ah ee ugu Fiican
Liiska 9-ka Kulliyadaha Bulshada ee ugu Fiican Hawaii
10ka Kulliyadaha Bulshada ee ugu Fiican Ohio
5 Koorsooyinka udiyaarinta SAT ee tooska ah ee bilaashka ah
Previous Post:9 Deeqaha fiqiga ee Kanada ee Ardayda Caalamiga ah
Post Next:6 Deeqda waxbarasho ee ugu Fiican ee Ardayda Caalamiga ah ee Kanada